၏အခြေအနေထိန်းချုပ်မှု အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလက်တွေ့တွင်၊ ဆွေးအမှိုက်ပုံ၏ဖြစ်စဉ်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျ, ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေအပြန်အလှန်နှင့်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွဲပြားခြားနားသောသဘောသဘာဝနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပျက်စီးခြင်းအလျင်၏ကွဲပြားခြားနားသော windrow အတူတကွရောနှောနေကြသည်။
အစိုဓာတ်သည်အော်ဂဲနစ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆွေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုဆွေး၏ချောမွေ့တိုးတက်မှုသေချာစေရန်, ဆွေး၏မူလပစ္စည်းများ၏ဆွေမျိုးအစိုဓာတ်ကို 40% မှ 70% ဖြစ်ပါတယ်။ အသင့်တော်ဆုံးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် ၆၀-၇၀% ဖြစ်သည်။ အလွန်နိမ့်သောသို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်သောအစိုဓာတ်ပစ္စည်းများသည်လေထုအတွင်းရှိအဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့မှသာအချဉ်ပေါက်ခြင်းမပြုမီရေစည်းမျဉ်းကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ပစ္စည်းအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု ၆၀% ထက်နည်းသောအခါအပူသည်နှေးသည်၊ အပူချိန်မှာနိမ့်သည်။ အပူချိန်နှေးကွေးခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းပြိုကွဲခြင်းစသောလေဝင်လေထွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
လေ့လာမှုများအရရေကိုဆွေးအမှိုက်ပုံထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်တက်ကြွသောစကားစုတွင်ဆွေးရင့်ကျက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ရေပမာဏသည် ၅၀-၆၀% ရှိသင့်သည်။ ထို့နောက်အစိုဓာတ်ကို ၄၀% မှ ၅၀% အထိထိန်းသိမ်းသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင်အစိုဓာတ်ကို ၃၀% အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။ အစိုဓာတ်မြင့်မားပါကအပူချိန် 80 at တွင်ခြောက်သွေ့သင့်သည်။
အပူချိန်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိလှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပစ္စည်းများ၏အပြန်အလှန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဆွေးအမှိုက်ပုံ၏ကန ဦး အဆင့်တွင် 30 ~ 50 the ၏အပူချိန်မှာ mesophile ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အပူကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆွေး၏အပူချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကောင်းဆုံးအပူချိန်မှာ 55 ~ 60 was ဖြစ်သည်။ Thermophilic သေးငယ်သောသက်ရှိများသည်များစွာသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအားပျက်စီးစေပြီး cellulose ကိုအချိန်တိုအတွင်းအလျင်အမြန်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည်ရောဂါပိုးများ၊ ကပ်ပါးကောင်များနှင့်ပေါင်းပင်မျိုးစေ့များအပါအ ၀ င်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသတ်ဖြတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် ၁ ပတ်အတွင်း ၅၅ ℃၊ ၆၅ at အပူချိန်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသတ်ရန် ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။ သို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာ 70 ။ ။
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည်ဆွေး၏အပူချိန်ကိုသက်ရောက်စေသောအချက်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံအစိုဓာတ်ကိုဆွေးအပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ထိန်းညှိခြင်းသည်ဆွေး၏နောက်အဆင့်တွင်ပူနွေးစေသည်။ ဆွေး၏ဖြစ်စဉ်အတွက်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုရှောင်ရှားခြင်း, အစိုဓာတ်ကို content တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အပူချိန်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဆွေးအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးပစ္စည်းများအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်နှင့်အစုအဝေးမှတစ်ဆင့်လေထုအတင်းအကျပ်အငွေ့ပျံမြှင့်တင်ရန်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဆွေး Turner စက်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဆွေး၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းညှိရန်အပူချိန်နှင့်အများဆုံးအပူချိန်၏အချိန်ကိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
● ကို C / N ကိုအချိုးအစားထိန်းချုပ်မှု
C / N အချိုးအစားသင့်လျော်သောအခါ, ဆွေးချောချောမွေ့မွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ C / N အချိုးသည်မြင့်မားလွန်းပါကနိုက်ထရိုဂျင်မရှိခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးထွားလာမှုအကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ပျက်စီးမှုနှုန်းသည်နှေးကွေးလာပြီး၊ အကယ်၍ C / N အချိုးနိမ့်လွန်းပါကကာဗွန်ကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်ပိုလျှံမှုသည်အမိုးနီးယားပုံစံများတွင်ရှုံးသည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရုံသာမကနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ၏ထိရောက်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ အော်ဂဲနစ်ဆွေးစဉ်အတွင်းပိုးမွှားပိုးမွှား protoplasm ရေးစပ်။ ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်တွင် protoplasm တွင်ကာဗွန် ၅၀၊ နိုက်ထရိုဂျင် ၅% နှင့်ဖော့စဖိတ် ၂၅% ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သောဆွေး၏ C / N ကို 20-30% ကြောင်းသုတေသီများကအကြံပြုသည်။
အော်ဂဲနစ်ဆွေး၏ကို C / N အချိုးမြင့်မားတဲ့ကာဗွန်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောနိုက်ထရိုဂျင်ပါရှိသောပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ကောက်ရိုး၊ ပေါင်းပင်များ၊ သေများနှင့်သစ်ရွက်များကဲ့သို့သောအချို့သောပစ္စည်းများတွင်အမျှင်များ၊ lignin နှင့် pectin များပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် C / N မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါဝင်သောပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်မွေးမြူရေးမြေ man ဇာကိုနိုက်ထရိုဂျင်အပိုပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့်ဝက်ချေးတွင်ပိုးမွှားများကြီးထွားမှုနှင့်မျိုးပွားနိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆွေးရင့်ကျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ပိုးမွှားများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ရရှိနိုင်သော ammonium နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်သည်။နဂိုအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulator ဒီအဆင့်အတွက်သင့်လျော်သည်။ မူလပစ္စည်းပစ္စည်းများစက်ထဲသို့ထည့်သောအခါမတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်လေထုနှင့်အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်ရရှိရန်မြေ ost ဇာရှိသည့်မြေ factor ဇာများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာပိုးမွှားများကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောအောက်စီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ လေ ၀ င်လေထွက်ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်အများဆုံးပေါက်သောအပူချိန်နှင့်ဖြစ်ပျက်မှုအချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အကောင်းဆုံးအပူချိန်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်လေဝင်လေထွက်တိုးမြှင့်ခြင်းသည်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သင့်လျော်သောလေဝင်လေထွက်နှင့်အောက်စီဂျင်သည်နိုက်ထရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှု၊ malodor ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဆွေး၏အစိုဓာတ်သည်အောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပိုးမွှားများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အေရိုးဗစ်ဆွေး၏အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစိုဓာတ်နှင့်လေဝင်လေထွက်ပစ္စည်းများအားပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကို အခြေခံ၍ ရေနှင့်အောက်စီဂျင်ညှိနှိုင်းမှုကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံး၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်နေစဉ်, ကပိုးမွှားကြီးထွားမှုနှင့်မျိုးပွားမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုအရအောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုသည် ၆၀ below အောက်အောက်တွင်မြင့်တက်နေပြီးသုံးစွဲမှုနှုန်းသည် ၆၀ higher ထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး ၇၀ above အထက်သုညနှင့်နီးစပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လေဝင်လေထွက်နှင့်အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုမတူညီသောအပူချိန်နှင့်အညီထိန်းချုပ်သင့်သည်။
● pH ထိန်းချုပ်မှု
pH တန်ဖိုးသည်ဆွေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ composting ၏ကန ဦး အဆင့်တွင်, pH ဘက်တီးရီးယားလှုပ်ရှားမှုသက်ရောက်သည်။ ဥပမာ pH = 6.0 သည်ဝက်ရင့်ကျက်မှုနှင့်လွှမှုန့်များ၏နယ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် pH <6.0 တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးပါသည်။ PH> 6. 0. တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုတွင်လျှင်မြန်စွာတိုးပွားသည်မြင့်မားသောအပူချိန်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါမြင့်မားသော pH နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တို့၏ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုသည်အမိုးနီးယားကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ အဏုဇီဝဗေဒများသည်အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်အဖြစ်သို့တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် pH လျှော့ချခြင်းကိုဖြစ်စေ5သို့ဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့မတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များသည်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်တည်ငြိမ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အော်ဂဲနစ်များမှစွန့်ပစ်သောအမိုးနီးယားသည် pH ကိုမြင့်တက်စေသည်။ နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်မြင့်မားသောအဆင့်တွင်တည်ငြိမ်စေသည်။ ဆွေး၏မြင့်မားသောအပူချိန်မှာတော့ 7.5 ~ 8.5 မှာသော pH တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဆွေးမှုနှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်မြင့်မားသော pH သည်အမိုးနီးယားကိုအလွန်အကျွံမတည်ငြိမ်စေခြင်းကြောင့် alum နှင့် phosphoric acid ပါဝင်ခြင်းဖြင့် pH ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းအခွအေနေ။ သို့သော်ဆွေးအခြေအနေကောင်းတစ်ခုလုံးကိုရရှိရန်ပစ္စည်းများကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေသင့်လျော်သောအခါ, ဆွေးချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆွေးထုတ်လုပ်ရန်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချထားပါသည်။